लेमन सामन मिठो आलु स्टिकहरू र ब्रोकोलीको साथ | भान्सा व्यंजनहरु
मिठो आलु स्टिकहरू र ब्रोकोलीको साथ लेमन साल्मन
मारिया vazquez | 23/05/2021 10:00 | माछा व्यंजनहरु
घरमा हामीलाई कम्बो भाँडा मनपर्दछ। हामी खानाको लागि प्राय: एउटा तयारी गर्छौं, त्यस अवसरको लागि हामी तयारी गर्छौं जुन त्यो अवसरको लागि हामीले अघिल्लो तयारीहरू भन्दा परेकोमा पाउँदछौं। फ्रिजलाई शून्यमा छोड्ने उत्तम विकल्प, किनकि हामी यसलाई लिम्बू सामनको साथ मीठो आलु स्टिकहरू र ब्रोकोलीको साथ छोड्दछौं।
यस कम्बो डिशको तयारीमा कुनै पनि जटिलता समावेश छैन। के तपाईं मा अधिक समय खर्च गर्न हुनेछ तयारी छ भुटेको मीठो आलु स्टिकहरू; जे होस् राम्रो गरी काट्नुहोस् र हल्का सागमा तेल लगाईएको छ, तिनीहरूले बनाउनको लागि १ 15 मिनेट भन्दा बढि लिदैन। यस घटकलाई मन पराउनेहरूका लागि उत्तम साथी।
सालमनको लागि, यो बोटमा वा प्यानमा तर तेल बिना र केहीसँग गरिन्छ ताजा ल्याउन निम्ती। त्यसो भए म कसरी भन्छु। एकचोटि पकाइएपछि, तपाईंसँग केहि गर्न बाँकी छ जस्तो म तल भन्छु। यो सालमन डिश पकाउनको लागि तयार हुनुहुन्छ?
मिठो आलु र ब्रोकोली स्टिकको साथ सामनको यो कम्बो प्लेट एक उत्तम डिनर विकल्प हो। यो परीक्षण गर्नुहोस्!
तयारी समय: 10 m
खाना पकाउने समय: 20 m
कुल समय: 30 m
सामनको २ ठूलो टुक्रा
१ मीठो आलु
As चम्मच मीठो पेपरिका
२ कागतीका स्लाइसहरू
हामी मीठो आलुको बोक्रा द्वारा शुरू गर्दछौं र यसलाई लाठीमा काट्ने। हामी यसलाई ओभन ट्रेमा राख्छौं, चर्मपत्र कागजको साथ लाइनमा।
दुई कप चम्मच जैतूनको तेल, पेपरिका, नुन र कालो मिर्चलाई सानो कपमा स्वाद गर्न मिक्स गर्नुहोस्। भान्छाको ब्रशको साथ लाठी ब्रश ओभनमा राख्नु अघि यो मिश्रणको साथ।
१º०ºC मा २० मिनेट सम्म बेक गर्नुहोस् वा निविदा सम्म
जबकि, ब्रोकली पकाउन गरौं चार मिनेट को लागी। पछि, हामी थोरै चिसो, ड्रेन र रिजर्भ गर्नुहोस्।
एकचोटि हामीसँग मीठा आलु र ब्रोकोली तयार छ, हामी सामन तयार गर्दछौं। नुन र मरिच दुबै स्लाइसहरू र तिनीहरूलाई तातो प्यानमा राख्नुहोस् जुन हामी पिन्चो तेलले फैल्यौं।
हामी minutes मिनेट पकाउँछौं र त्यसपछि हामी यसलाई बदल्छौं। क्षण जुन हामीले यसको फाइदा लिन्छौं lemon नीबू स्लाइसहरू थप्नुहोस्। नभए सम्म अर्को तर्फ पकाउनुहोस् र त्यसपछि प्लेटमा मिठो आलु स्टिकको साथ सेवा गर्नुहोस्।
समाप्त गर्न, यदि हामी चाहन्छौं भने, हामी प्यान मार्फत ब्रोकोली पार गर्छौं, सोया सॉस थप्दै। केहि मिनेट को लागी साउट गर्नुहोस् र मीठो आलु स्टिक र ब्रोकोलीको साथ लेमन सामनको सेवा गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » भाँडा » माछा व्यंजनहरु » मिठो आलु स्टिकहरू र ब्रोकोलीको साथ लेमन साल्मन
मिनी चकलेट नेपोलिटन्स
स्याउ र किसमिस संग दलिया केक